Tsika dzechiChinese Mishonga, Herbal Extract, Zvibereko Uye Ruva Tea - HEX
HEBEI HEX IMP. & EXP. KAMPANI ikambani yakanangana nekutengesa kunze kwemiriwo mbishi, yekutanga yakagadziriswa mishonga, michero yemiti, ruva tii, herbal tii, mhuka dzinotora, zvakasikwa hutano zvinowedzera. Kurapa kwechinyakare kwechinyakare kwave kuchishandiswa senzira yekurapa kwehutano kutenderera pasirese kwemazana emakore. Iyi miriwo inouya kubva mumiti, maruva uye zvirimwa zvinowanikwa musango uye zvakarimwa nekuda kwekuporesa kwavo kwemakore mazhinji.
KAMPANI inotarisira zvakanyanya mukusarudza mishonga nemishonga yemakwenzi. zvakare Iine yako yega yakasviba-isina kudyara chigadziko uye mugadziri mukugadziriswa kwechinyakare Chinese mushonga (TCM) .HEX inosarudza vagadziri zvakanyatso chengetedza uye inogara ichitarisa maitiro ekudzora mhando kwezvigadzirwa zvedu.
Gan Mao Ling (Firimu yakavharwa piritsi)
Inotsigira hutano hwekufema system, immune system, nervous system, zvitadzo, mudumbu uye ura uye hutano hwese hwemuviri.
Inotsigira hutano hwema immune system uye gastrointestinal system.Inobatsira kudzikamisa dumbu kuzara. Zvishongedzo Patchouli, Perilla mashizha, Angelica dahurica, Atractylodes macrocephala (stir-fried), Tangerine peel, Pinellia (yakagadzirwa), Magnolia (yakagadzirwa neginger), Poria, Platycodon, licorice, pot dumbu, jujube, ginger. Zvishongedzo: Hapana Hunhu Ichi chigadzirwa chigadzirwa chine mutsvuku chine piritsi yakasviba. inonhuhwirira, inotapira uye inovava zvishoma. Chenjedzo 1. Kudya kunofanira kuve kwakareruka. 2. Hazvisi zvekupa zano ...
Tsika dzechiChinese patent mishonga mapiritsi, hupfu, kugadzirira kapusipisi, mvura yemumukanwa uye gadziriro yemishonga yechiChinese inogadzirwa kubva kuChinese mishonga yemakwenzi. Inogona kushandiswa kurapa zvirwere, kudzivirira zvirwere nekusimudzira hutano.
Cranberry dhonza hutano hwemwoyo, asi zvakare hunoshanda hwekudzivirira uye hwekuwedzera kurapwa kwevakadzi vakuru hutachiona hwehutachiona hutachiona
Diosgenin yakatorwa: Inodaidzwa kuti "mushonga wegoridhe" mune yekurapa. Diosgenin yakakosha yakakosha mbishi zvigadzirwa zvekugadzira steroid mahormone. Steroid mahormone ane yakasimba anti-hutachiona, anti-allergies, anti-hutachiona uye anti-kuvhunduka kwemasipikisi mhedzisiro, kurapa kweiyo rheumatism, yemoyo, lymphoblastic leukemia, cellular encephalitis, zvirwere zveganda, anti-bundu uye varwere vakakosha kwekushandisa kwakakosha kwe zvinodhaka; Icho chinhu chakasvibirira chepamuviri Ketenolo ...
Stevioside (CNS: 19.008; INS: 960), inozivikanwawo seStevioside, iglycoside yakatorwa mumashizha aStevia Rebaudia (Stevia), mhuri yezvirimwa mumhuri yemubatanidzwa. Stevia shuga calorific value inongova 1/300 ye sucrose, isina kunyudzwa mushure mekudyiwa kwemuviri wemunhu, haina kuburitsa kupisa, inokodzera vane chirwere cheshuga uye vakafutisa varwere zvinotapira. Kana Stevia yakasanganiswa nesucrose fructose kana isomerized shuga, kutapira kwayo uye kuravira kunogona kuvandudzwa. Inogona Kushandiswa zvihwitsi, makeke, zvinwiwa, S ...